ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် နောက်ခံထားပြီး Battle Royale Mode ပါဝင်လာတဲ့ Battlefield V
18 Aug 2018 . 11:57 PM
Battlefield 1 ထွက်ခဲ့တုန်းက ပထမကမ္ဘာစစ်ကို ဇာတ်အိမ်ယူထားပေမယ့် Multiplayer အသားပေးထားတာဆိုတော့ ကစားရတာ ပျင်းဖို့ကောင်းနေခဲ့မယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီကြားထဲ အထင်ကရ တိုက်ပွဲဆိုလို့ မဟာမိတ်နဲ့ ဂျာမန်နယ်စပ်ကို ပိုင်းခြားထားတဲ့ No Man’s Land ဖြတ်ပြေးရတဲ့ အခန်းလောက်ပဲ ကစားရတာ ရေလည် Feel တာပါ၊ နောက် လန်ဒန်မြို့ထဲ ဂျာမန်လေတပ် ဝင်စီးလို့ မဟာမိတ်ဖက်က စစ်ကူပေးရတဲ့ အခန်းဆို ကစားရတာ ပထမကမ္ဘာစစ်ထဲ ရောက်သွားသလိုပါပဲ။
Pass the No Man’s Land?
ဒီလို Shooting Game ထဲမှာ သမိုင်းကြောင်း နောက်ခံထားတဲ့ ဂိမ်းကောင်း ထုတ်ပေးနေတာဆိုလို့ Activision နဲ့ EA ပဲ ရှိတာပါ။ အခုခေတ် Modern တိုက်ပွဲလို Graphics အလန်းစား Shooting Game တွေ ပေါ်မလာခင်တုန်းက Call of Duty: World at War နဲ့ Battlefield Vietnam လို ဂိမ်းတွေပဲ ခေတ်စားခဲ့တာပါ။ ဒါတောင်မှ ဂိမ်မာတွေ ထုတ်ပေးပါလို့ အတင်းတောင်းဆိုထားလို့ သမိုင်းကြောင်း နောက်ခံထားတဲ့ ဂိမ်းကောင်းတွေ ထွက်လာတာလို့ ပြောရပါမယ်။
Battlefield V Cinematic Wallpaper
အဲ့ဒါတောင် Story Line အဓိကထားပြီး စစ်ပွဲထဲ စီးမျောပေးရမယ့်အစား Multiplayer ပဲ အသားပေးထားလို့ Battlefield 1 ထွက်လာတဲ့အခါ ပထမကမ္ဘာစစ်ရဲ့ အထင်ကရ တိုက်ပွဲတွေ များများစားစား ပါမလာခဲ့ပါဘူး။ ဒီကြားထဲ Call of Duty ကနေ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်နောက်ခံပြုထားတဲ့ D-Day နဲ့ နော်မန်ဒီ ကမ်းတက်တိုက်ပွဲလို တကယ်ပြင်းထန်လွန်းတဲ့ စစ်ပွဲတွေနဲ့ အဖွင့်လှသွားခဲ့တာကြောင့် Battlefield Fan တွေ အတော်လေး Feel ကြဲသွားခဲ့မယ် ထင်ပါတယ်။
Air Strike or Heavy Bombing?
ဒါကြောင့်မလို့ အားကျမခံ Battlefield V ဆိုပြီး ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းက Battle of Rotterdam ကို ဇာတ်အိမ်ယူထားတဲ့ Trailer ထုတ်ပြလိုက်ပါပြီ။ အရင် Battlefield 1 Trailer တုန်းလို Cinematic ခပ်ကျဲကျဲ သုံးထားပြီး Multiplayer ကစားပုံပြထားရင်း Rotterdam မြို့ထဲ ဂျာမန်တွေ ပစ်ချလိုက်တဲ့ လက်နက်ကြီးတွေကြောင့် မဟာမိတ်တပ်ရော၊ ဒတ်ခ်ျစစ်သားတွေပါ ခွေးပြေး၊ ဝက်ပြေးပြေးရင်း မွစာကြဲကုန်တာ တွေ့ရမှာပါ။
Rotterdam City – Netherlands
ဆိုတော့ တကယ်စစ်ပွဲတုန်းကလို Rotterdam Booming လို့ အမည်ရတဲ့ နာမည်ကျော်တိုက်ပွဲကို ဇာတ်အိမ်ယူထားတာမလို့ သေချာပါတယ်၊ E3 ကတည်းက EA Tease လုပ်ထားခဲ့တဲ့ Battle Royale Mode ပါ။ Trailer မှာ ပြသွားတဲ့ ကစားကွက်တွေက ရေလည်လန်းပါတယ်၊ ဘယ်အချိန် ဘာဖြစ်မလဲ လုံးဝ မှန်းဆထားလို့မရဘဲ ပြေးရင်းလွှားရင်း မိုးပေါ်က ပျက်ကျလာတဲ့ လေယာဉ်ထိရင် သေသွားတာမျိုးတောင် ပါပါတယ်။ ဂိမ်းက ဘယ်လောက် Intense ဖြစ်သလဲဆိုရင် Rotterdam မြို့က လွှတ်ခါနီး ဂျာမန်တွေ ဆော်ထဲ့လိုက်တဲ့ လက်နက်ကြီးကျလို့ ဖရိုဖရဲဖြစ်သွားတဲ့အချိန် ဘေးကနေ လောင်ချာဒုံးနဲ့ ထပ်အထုခံရတာကိုပါ ပြထားပါတယ်။
Wall of fire (Battle of Rotterdam)
Trailer အဆုံးမှာ ငရဲမီးဗုံးမိလို့ တဖြည်းဖြည်း ဝိုင်းလာတဲ့ မီးလျှံအကြား ပြေးပေါက်မဲ့နေတဲ့ စစ်သားတွေကို ပြသထားတာကြောင့် Fortnite နဲ့ PUBG မှာလို Restricted Area ထဲ ရောက်သွားလို့ ရှောသွားတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် Battle Royale Mode မှာ တိုက်ပွဲပိုပိုပြီး ပြင်းထန်လာလို့ Player တွေ ကစားဘောင် တဖြည်းဖြည်းကျဉ်းလာတာကို EA တမင်ပြထားတာလား ဝေခွဲမရပါဘူး။ ဒါမယ့် ဘယ်လိုပဲ ကစားရ ကစားရ လမ်းမှာ တွေ့တွေ့သမျှ တင့်ကားတွေ၊ စစ်လေယာဉ်ကြီးတွေစီးပြီး သူချကိုယ်ချ၊ ဗုံးတွေတမုန်းချဲလို့ ရတာမျိုး ပြထားတာဆိုတော့ Battlefield Fans တွေ ကျေနပ်အားရမယ့် ဂိမ်းကောင်းဖြစ်လာဦးမှာပါ။
Watch Devastation of Rotterdam here.
ဒုတိယ ကမ်ဘာစဈ နောကျခံထားပွီး Battle Royale Mode ပါဝငျလာတဲ့ Battlefield V
Battlefield 1 ထှကျခဲ့တုနျးက ပထမကမ်ဘာစဈကို ဇာတျအိမျယူထားပမေယျ့ Multiplayer အသားပေးထားတာဆိုတော့ ကစားရတာ ပငျြးဖို့ကောငျးနခေဲ့မယျ ထငျပါတယျ။ ဒီကွားထဲ အထငျကရ တိုကျပှဲဆိုလို့ မဟာမိတျနဲ့ ဂြာမနျနယျစပျကို ပိုငျးခွားထားတဲ့ No Man’s Land ဖွတျပွေးရတဲ့ အခနျးလောကျပဲ ကစားရတာ ရလေညျ Feel တာပါ၊ နောကျ လနျဒနျမွို့ထဲ ဂြာမနျလတေပျ ဝငျစီးလို့ မဟာမိတျဖကျက စဈကူပေးရတဲ့ အခနျးဆို ကစားရတာ ပထမကမ်ဘာစဈထဲ ရောကျသှားသလိုပါပဲ။
ဒီလို Shooting Game ထဲမှာ သမိုငျးကွောငျး နောကျခံထားတဲ့ ဂိမျးကောငျး ထုတျပေးနတောဆိုလို့ Activision နဲ့ EA ပဲ ရှိတာပါ။ အခုခတျေ Modern တိုကျပှဲလို Graphics အလနျးစား Shooting Game တှေ ပျေါမလာခငျတုနျးက Call of Duty: World at War နဲ့ Battlefield Vietnam လို ဂိမျးတှပေဲ ခတျေစားခဲ့တာပါ။ ဒါတောငျမှ ဂိမျမာတှေ ထုတျပေးပါလို့ အတငျးတောငျးဆိုထားလို့ သမိုငျးကွောငျး နောကျခံထားတဲ့ ဂိမျးကောငျးတှေ ထှကျလာတာလို့ ပွောရပါမယျ။
အဲ့ဒါတောငျ Story Line အဓိကထားပွီး စဈပှဲထဲ စီးမြောပေးရမယျ့အစား Multiplayer ပဲ အသားပေးထားလို့ Battlefield 1 ထှကျလာတဲ့အခါ ပထမကမ်ဘာစဈရဲ့ အထငျကရ တိုကျပှဲတှေ မြားမြားစားစား ပါမလာခဲ့ပါဘူး။ ဒီကွားထဲ Call of Duty ကနေ ဒုတိယ ကမ်ဘာစဈနောကျခံပွုထားတဲ့ D-Day နဲ့ နျောမနျဒီ ကမျးတကျတိုကျပှဲလို တကယျပွငျးထနျလှနျးတဲ့ စဈပှဲတှနေဲ့ အဖှငျ့လှသှားခဲ့တာကွောငျ့ Battlefield Fan တှေ အတျောလေး Feel ကွဲသှားခဲ့မယျ ထငျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့မလို့ အားကမြခံ Battlefield V ဆိုပွီး ဒုတိယကမ်ဘာစဈတုနျးက Battle of Rotterdam ကို ဇာတျအိမျယူထားတဲ့ Trailer ထုတျပွလိုကျပါပွီ။ အရငျ Battlefield 1 Trailer တုနျးလို Cinematic ခပျကြဲကြဲ သုံးထားပွီး Multiplayer ကစားပုံပွထားရငျး Rotterdam မွို့ထဲ ဂြာမနျတှေ ပဈခလြိုကျတဲ့ လကျနကျကွီးတှကွေောငျ့ မဟာမိတျတပျရော၊ ဒတျချြစဈသားတှပေါ ခှေးပွေး၊ ဝကျပွေးပွေးရငျး မှစာကွဲကုနျတာ တှရေ့မှာပါ။
ဆိုတော့ တကယျစဈပှဲတုနျးကလို Rotterdam Booming လို့ အမညျရတဲ့ နာမညျကြျောတိုကျပှဲကို ဇာတျအိမျယူထားတာမလို့ သခြောပါတယျ၊ E3 ကတညျးက EA Tease လုပျထားခဲ့တဲ့ Battle Royale Mode ပါ။ Trailer မှာ ပွသှားတဲ့ ကစားကှကျတှကေ ရလေညျလနျးပါတယျ၊ ဘယျအခြိနျ ဘာဖွဈမလဲ လုံးဝ မှနျးဆထားလို့မရဘဲ ပွေးရငျးလှားရငျး မိုးပျေါက ပကျြကလြာတဲ့ လယောဉျထိရငျ သသှေားတာမြိုးတောငျ ပါပါတယျ။ ဂိမျးက ဘယျလောကျ Intense ဖွဈသလဲဆိုရငျ Rotterdam မွို့က လှတျခါနီး ဂြာမနျတှေ ဆျောထဲ့လိုကျတဲ့ လကျနကျကွီးကလြို့ ဖရိုဖရဲဖွဈသှားတဲ့အခြိနျ ဘေးကနေ လောငျခြာဒုံးနဲ့ ထပျအထုခံရတာကိုပါ ပွထားပါတယျ။
Trailer အဆုံးမှာ ငရဲမီးဗုံးမိလို့ တဖွညျးဖွညျး ဝိုငျးလာတဲ့ မီးလြှံအကွား ပွေးပေါကျမဲ့နတေဲ့ စဈသားတှကေို ပွသထားတာကွောငျ့ Fortnite နဲ့ PUBG မှာလို Restricted Area ထဲ ရောကျသှားလို့ ရှောသှားတာလား၊ ဒါမှမဟုတျ Battle Royale Mode မှာ တိုကျပှဲပိုပိုပွီး ပွငျးထနျလာလို့ Player တှေ ကစားဘောငျ တဖွညျးဖွညျးကဉျြးလာတာကို EA တမငျပွထားတာလား ဝခှေဲမရပါဘူး။ ဒါမယျ့ ဘယျလိုပဲ ကစားရ ကစားရ လမျးမှာ တှတှေ့သေ့မြှ တငျ့ကားတှေ၊ စဈလယောဉျကွီးတှစေီးပွီး သူခကြိုယျခြ၊ ဗုံးတှတေမုနျးခြဲလို့ ရတာမြိုး ပွထားတာဆိုတော့ Battlefield Fans တှေ ကနြေပျအားရမယျ့ ဂိမျးကောငျးဖွဈလာဦးမှာပါ။